Ogaden News Agency (ONA) – Kulan baladhan oo Jaaliyada Melbourne yeelatay iyo Booqashadii af-hayeenka JWXO Mudane A. Hirmooge (Cadani)
Kulan baladhan oo Jaaliyada Melbourne yeelatay iyo Booqashadii af-hayeenka JWXO Mudane A. Hirmooge (Cadani)
Waxaa maalintii Axada bishuna ahey 27 January 2013 isugu yimid shir balaadhan oy soo qabanqaabiyeen jaaliyada S.Ogadenia ee Victoria , oy ka soo qeyb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada sida ururka OYSU Melbourne, Ururka Haweenka iyo ururka Odayaasha. Shirkaas uu marti oogu ahaa Af-hayeenka Jwxo Mudane Abdiqadir Hirmooge (Cadani), Gudoomiyihii hore New Zealand Mudane Ciid iyo Sheekh Fatxi
Waxaa Shirka lagu furay aayadaha qur’aanka oo uu akhriyey halgame Libaan Cabdulahi, taasoo uu ku xigay muxaadaro diini ah oo uu soo jeediyay Halgame Sheekh Fatxi. Maxadarada ayay dadweynihii dhagaysanayay ay aad ula dhaceen waxayna ahayd maxadaro ka turjimaysay Halganka Gobanimadoonka shacabka Ogadenya ee Jwxo ay hogaaminayso.
Ka dib waxaa lagu soo dhaweeyay microfoonka gudoomiyaha jaaliyada Melbourne Mudane Hikim Sheikh oo u mahadceliyey dhamaan shacabka ka soqeybgalay shirka isla markaasna faahfaahin dheer ka siiyay wax qabadka jaaliyada sanadkii ugu dabeyey. Wax qabadka Jaaliyada Victroia ayaa waxaa ka mid ahaa dhabarjabintiin kalkaaliyaasha cadowga Ethiopia Abdi Ubo iyo waftigi Melbourne Booqasho ku yimid.
Waxaa lagu soo dhaweeyay Makarafoonka Sayid Dhuux oo matalayey ururka Odayaasha. Sayid Dhuux ayaa shaaca ka qaaday in ey halganka jwxo eey taageerayaan isagoo dadkii ka soo qeyb galay shirka ku baraarujiyey in halganka Ogadenia ka socoda uu xaq yahay.
Waxaa magarafoonka lagu soo dhaweyey halgame Ciid Gudomiyihi hore ee Jaaliyada New Zealand . Halgame Ciid ayaa fahfaahin ka baxiyey wax qabadkiisa mudada uu jaaliyada sohayeey iyo waxayaalaha u lakulmay mudadii uu taageersana halganka Xaqa ah. Mudan Ciid ayaa gulmaray Taarikhda Ogadeni.
Luul Cabdi Macalin oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada Somalida Ogadenia Melbourne (OYSU) ayaa war bixin ka bixisay wax qabadkii dhalinyarada sanadkii lasoodhaafay iyo abaabulka ey wadaan sanadkaan.
Waxaa lagu soo dhaweeyay makarafoonka l Mudane Cadani oo booqasho ku yimid Melbourne. Booqashadaan Afhayiinka Jwxo ayaa wuxuu ka mid yahay kulamada madaxda Jwxo eey layeelanaysay Jaaliyada Ogadenia ee dunida dacaladeeda ka jirta. Mudan Cadaan ayaa warbixin dheer ka bixiyeey Halganka xaalada u marayo iyo xalada wadanka Ogadenia kusuganyahay. Wuxuu kaloo fahfaahin ka bixiyey dagaaladii dhex maray Jabhada JWXO iyo gumeysiga Ethiopia. Mudana Cadaani ayaa dadkii shirka kasooqybgalay u sheegay in halganka JWXO uu maanta marayo heer caalami ah.
Shirkii ayaa ku dhamaaday jawi aad u wanaagsan, shacabkii shirka ka sooqybgalayna waxaa ka muuqatay farxad iyo kalsooni dhanka Halganka.
Ururka OYSU Melbourne ayaa iyaguna kulan layeshay afhayiinka JWXO mudane Cadani Hirmooge. Kulankaan oo ahaa mid fursad u ah ururka oo runtii dhaqdhaaq xoogan kawada gobalka Victoria, Melbourn. Labadii sano ey OYSU Melbourne jirtay waxa ey muujiyeen dadaal iyo hormar.
Mudane Cadaani ayaa ku faraxsanaa waxqabadka OYSU Melbourne, una sheegay in dadaalka iyo hoosha ey ka wadaan Melbourn ay tahay mid madaxda ururka ay aad ugu faraxsanyihin. Wuxuu mudane Cadani kula dardaarmay in ey OYSU Melbourn sii kordhiyaan;
1) Abaabulka dhalinyarada soo koreysa,
2) in ey xirirka Dowlada iyo hay’adaha xaquuqul insaanka siikordhiyaan,
3) in ey kordhiyaan hida iyo dhaqanka Ogadenia
4) in ey siixoojiyaan wadashaqeynta Jaaliyada.
Kulankaan ayaa haa midkii labaad ey layeshaan Mudane cadaani ayagoo fursad u helay in ey fikirkooda u soobandhigaan Mudane Cadani madama madaxda Jwxo ka midyahay. OYSU Melbourn ayaa ka codsaday Mudane Cadani in ey jeclaan lahaayeen in 6 bilood ama sanadkii layeshaan kulankaan oo kale Madaxda Jwxo. Kulanka OYSU/Melb. iyo Afhateenka JWXO ayaa ku dhamaatay jawi wanagsan.
Mudane Abdiqadir Hirmooge (Cadani) ayaa ku soo gaaray booqasho Gobalka Victoria, magaalada Melbourne malinti sabtida 26 January 2013 oo si fiican loogu soo dhaweeyay. Booqashadan ayaa ka mid ahaa kulamada madaxda JWXO eey layeelanayaan Jaaliyadaha Ogadenia ee dunida dacaladeeda ka jirta.
Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today.”Malcolm X